Shiinaha M384 infrared module-ka kuleylka waxsoosaarka Warshad iyo Warshad | Dianyang
M384 moduleka kuleylka ee infrared
Sawirka kuleylka ee infrared wuxuu jabayaa caqabadaha muuqaalka ee fiisigiska dabiiciga ah iyo waxyaabaha caamka ah, wuxuuna cusbooneysiiyaa muuqaalka waxyaabaha. Waa saynis casri ah iyo tiknoolajiyad casri ah, oo door togan oo muhiim ah ka ciyaareysa adeegsiga howlaha militariga, wax soo saarka warshadaha iyo qeybaha kale.
Qalabka sawir-qaadista ee kuleylka ah wuxuu ku saleysan yahay baakadaha dhoobada ah ee aan la qaboojin ee vanadium oxide detector si loo horumariyo waxqabadka sare ee wax soo saarka kuleylka ee infrared wax soo saarka, alaabooyinka waxay qaataan isbarbar dhigga wax soo saarka dhijitaalka ah, isdhexgalka ayaa hodan ah, marin u habeyn noocyo kala duwan oo farsamo maskaxeed leh, waxqabad sare iyo awood hooseeya. isticmaalka, mug yar, oo u fududahay astaamaha isdhexgalka horumarka, ayaa la kulmi kara codsiga noocyada kala duwan ee heerkulka cabbirka infrared ee baahida horumarka labaad.
Waqtigan xaadirka ah, warshadaha tamarta ayaa ah warshadaha ugu ballaaran ee la isticmaalo ee qalabka imaging infrared kululaynta qalabka madaniga ah. Maaddaama ogaanshaha ugu wax ku oolka badan ee qaangaarka ah la-xiriir la'aanta macnaheedu yahay, sawir qaadaha kuleylka ee infrared wuxuu si weyn u horumarin karaa horumarka helitaanka heerkulka ama tirada jirka, iyo sii wanaajinta kalsoonida hawlgalka ee qalabka korontada keena. Qalabka sawir-qaadista kuleylka ee infrared wuxuu ka ciyaaraa door aad muhiim u ah sahaminta geeddi-socodka sirdoonka iyo otomatiga super ee warshadaha korantada.
Habab badan oo kormeer ah cilladaha dusha sare ee qaybaha baabuurta ayaa ah habka tijaabada nondestructive ee kiimikooyinka dahaadhka ah. Sidaa darteed, kiimikooyinka dahaarka leh waa in laga saaraa baaritaanka ka dib. Sidaa darteed, marka laga eego hagaajinta deegaanka shaqada iyo caafimaadka hawl wadeennada, waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo habab tijaabo ah oo aan halaag lahayn iyada oo aan kiimiko lahayn.
Waxyaabaha soo socdaa waa hordhac kooban oo ku saabsan qaar ka mid ah hababka tijaabada sunta aan kiimikada lahayn ee kiimikada ah. Hababkani waa in lagu dabaqo nalka, kuleylka, ultrasonic, eddy current, hadda iyo kicinta kale ee bannaanka ee sheyga kormeerka si loo beddelo heerkulka shayga, loona isticmaalo sawir qaade kuleylka infrared si loogu sameeyo baaritaan aan waxyeello lahayn oo ku saabsan cilladaha gudaha, dildilaaca, diirka gudaha sheyga, iyo sidoo kale alxanka, isku xidhka, cilladaha mosaiga, cufnaanta inhomogeneity iyo dhumucda filimka dusha.
Tikniyoolajiyadda kuleylka kuleylka ah ee 'infakshanka' kuleylka ah ee tijaabada ah ee aan nuuxnuuxsiga laheyn wuxuu leeyahay faa'iidooyinka dhaqsaha badan, aan baabi'in, xiriir la'aan, waqtiga-dhabta ah, aag ballaaran, ogaanshaha fog iyo muuqaalka. Way u fududahay xirfadlayaashu inay si dhakhso leh u bartaan habka isticmaalka. Waxaa si aad ah loogu isticmaalay wax soo saarka farsamada, metallurgy, aerospace, medical, petrochemical, power power iyo meelaha kale. Horumarinta tiknoolajiyada kombiyuutarka, nidaamka kormeerka iyo ogaanshaha ee sawir qaadaha kulaylka ee infrared oo ay weheliso kombuyuutarka ayaa noqday nidaam lagama maarmaan ah oo lagu ogaado meelaha iyo aad u badan.
Imtixaanka aan dhammaystirka lahayn waa maaddo tikniyoolajiyadeed la adeegsaday oo ku saleysan sayniska iyo teknolojiyadda casriga ah. Waxay ku saleysan tahay ujeedada ah in aan la burburin sifooyinka jireed iyo qaab dhismeedka sheyga in la tijaabiyo. Waxay adeegsaneysaa qaabab jireed si loo ogaado inay jiraan wax kaabasho (cilado) gudaha gudaha ama dusha sare ee shayga, si markaa loo xukumo in shayga la tijaabinayo uu yahay mid u qalma, ka dibna la qiimeeyo ku-dhaqankiisa. Waqtigan xaadirka ah, sawir qaadaha kuleylka ee infrared wuxuu ku saleysan yahay xiriir la'aan, dhakhso, wuxuuna cabirayaa heerkulka bartilmaameedyada socda iyo bartilmaameedyada yaryar. Waxay si toos ah u soo bandhigi kartaa aagga heerkulka dusha sare ee walxaha leh heerkulka heerkulka sarreeya (illaa 0.01 ℃). Waxay adeegsan kartaa qaabab kala duwan oo bandhig ah, keydinta xogta iyo kumbuyuutarka farsameynta caqliga badan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa aerospace, metallurgy, mashiinada, petrochemical, mashiinada, naqshadaha, ilaalinta kaynta dabiiciga ah iyo meelaha kale.
Meel Pixel ah
FOV / dhererka dhererka
* Isugeynta isweydaarsiga qaabka wax soo saarka 25Hz ；
-15 ～ + 60 ℃
<30g lens 13mm muraayadaha）
26 * 26 * 26.4 lens 13mm muraayadaha）
Isku xirka xogta
barbar / USB
Multiple-marsho xoojinta faahfaahinta
Isku hagaajinta sawirka
Iftiin cad / madow kulul / taarikada midabbo badan oo been abuur ah
-20 ℃ ~ + 120 ℃ (loo habeeyay ilaa 550 ℃)
± 3 ℃ ama ± 3%
Buugga / otomaatiga
Soosaarka tirakoobka heerkulka
Waqtiga dhabta ah ee wax soo saar is barbar socda
Tirakoobka cabbirka heerkulka
Taageer tirakoobka ugu badan / ugu yar analysis falanqaynta heerkulka
sharaxaad interface interface
Muuqaalka isticmaalaha ee 'Fig1'
Shayga ayaa korsanaya isku xiraha 0.3Pitch 33Pin FPC (X03A10H33G), danabkuna waa: 3.8-5.5VDC, ilaalinta hoos udhaca lama taageerin.
Foomka 1 isdhexgalka muuqaalka kuleylka
Lambarka nambarka magac nooca
1,2 VCC Awood - Koronto
3,4,12 GND Awood - 地
I - USB karti leh
Default: 1.8V LVCMOS; (haddii loo baahdo 3.3V
Soosaarka LVCOMS, fadlan nala soo xiriir)
O XOGTA 1
O XOGTA 2
O XOGTA 5
O XOGTA 6
isgaarsiinta waxay qaadataa borotokoolka isgaarsiinta UVC, qaabka muuqaalka waa YUV422, haddii aad u baahan tahay xirmada horumarinta xiriirka USB, fadlan nala soo xiriir;
naqshadda PCB, calaamadda fiidiyowga dijitaalka ah oo la soo jeediyey 50 control xakamaynta impedance.
Foomka 2 faahfaahinta korantada
Qaabka VIN = 4V, TA = 25 ° C
Xaddiga danab gelinta VIN -
Awood ILOAD USBEN = GND
USBEN = SARE
Foomka 3 Absolute ugu badnaan qiimeynta
VIN ilaa GND -0.3V ilaa + 6V
DP, DM ilaa GND -0.3V ilaa + 6V
USBEN ilaa GND -0.3V ilaa 10V
SPI ilaa GND -0.3V ilaa + 3.3V
VIDEO ilaa GND -0.3V ilaa + 3.3V
I2C ilaa GND -0.3V ilaa + 3.3V
-55 ° C illaa + 120 ° C
Heerkulka hawlgalka -40 ° C illaa + 85 ° C
Xusuusin: Meelaha la taxay ee buuxiya ama dhaafaya qiimeynta ugu sarreysa ee ugu sarreysa waxay u geysan kartaa waxyeello joogto ah badeecada.Tani waa uun qiimeyn cadaadis ah; Uma jeedin in howlaha wax soo saarka ee sheyga ee kuwan ama xaalado kale ay ka sarreeyaan kuwa lagu sharraxay qaybta howlaha ee qeexitaankan. Hawlgallada dheeraaday ee ka sarreeya xaaladaha shaqo ee ugu sarreeya waxay saameyn ku yeelan karaan kalsoonida sheyga.
Jaantuska iskuxirka soosaarka soosaarka kumbuyuutarka (T5)
Jaantus: 8bit Sawir is barbar socda
Jaantus: 16bit Sawir is barbar socda iyo xogta heerkulka
(1) Waxaa lagugula talinayaa in aad u isticmaasho xogta muunad qaadista soo kordheysa ee saacadda;
(2) Iswaafajinta goobta iyo iswaafajinta khadka ayaa labaduba waxtar badan leh;
(3) Qaabka xogta sawirka waa YUV422, xogta yarna waa Y, tan badana waa U / V;
(4) Qeybta xogta heerkulka waa (Kelvin (K) * 10), heerkulka saxda ahna waa aqrin qiimaha / 10-273.15 (℃).
Si aad adiga iyo dadka kaleba uga ilaaliso dhaawac ama aad uga ilaaliso qalabkaaga waxyeellada, fadlan akhri dhammaan macluumaadka soo socda ka hor intaadan isticmaalin aaladdaada.
1. Si toos ah ha u eegin ilaha shucaaca xoogga badan sida qorraxda ee qaybaha dhaqdhaqaaqa;
2. Ha taaban ama ha u isticmaalin waxyaabo kale si aad ugu dhacdo daaqadda baaraha;
3. Ha ku taaban qalabka iyo fiilooyinka gacmo qoyan;
4. Ha leexin ama dhaawicin fiilooyinka isku xiraya;
5. Ha ku xoqin qalabkaaga waxyaabaha wax lagu dhalaaliyo;
6. Ha furin ama ha ku dhejin fiilooyin kale adigoon goyn korontada;
7. Ha ku xerin fiilada ku xiran si qaldan si aad uga fogaato waxyeelada qalabka;
8. Fadlan fiiro gaar ah u yeelo ka hortagga korantada ma guurtada ah;
9. Fadlan ha kala furfurin qalabka. Haddii uu jiro wax cillad ah, fadlan la xiriir shirkaddayada si aad u hesho dayactir xirfadeed.
Sawiridda cabbirka isdhexgalka mechnical
Hore: M256 moduleka kuleylka ee aan la qaboojin
Xiga: M640 module infakshanka kuleylka ah
M640 module infakshanka kuleylka ah
SR-19 module sawir-qaadaha kuleylka ah
M256 moduleka kuleylka ee aan la qaboojin